कार्यपालिका सदस्यले नै दलित महिलालाई कालो मोसो दल्न लगाइन् - Pradesh Dainik
कार्यपालिका सदस्यले नै दलित महिलालाई कालो मोसो दल्न लगाइन्
बुधबार, चैत १३, २०७५ , प्रदेश दैनिक
मोरङ, मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका कार्यपालिका सदस्यले नै एक महिलालाई कालोमोसो दल्न लगाएको आरोप लागेको छ । पिडकलाई के गरेको भनेर अन्य व्यक्तिले सोधीखोजी गर्दा यो महिलाको अधिकार हो, हामीले जे पनि गर्न पाउछौँ भनेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
नगरको वडा नं. ८ निवासी शारदा वि.कलाई कार्यपालिका सदस्य सहित गाउले मिलेर कालोमोसो दलेको मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । शारदासंग छिमेकी पारस र फिपराज जवेगुको पैशा लेनदेन रहेको र सोही निहुमा पटक पटक घरमा नै आएर कुटपिट गरेको पिडितले बताएकी छन् । पिडक पारस र फिपराजले २०७१ साल असार ५ गते ४ लाख रुपैया ऋण लिएको तमसुकको प्रतिलिपी समेत रहेको छ । सो तमसुकमा उल्लेख भए अनुसार पारसको भाइ किरण जवेगु बैदेशिक रोजगारमा जानका लागि रकम आवश्यक परेकाले २०७१ साल माघ मसान्त सम्ममा सावाँ र व्याज नै चुक्ता गर्ने गरी ऋण लिएको देखिन्छ ।
रकम लेनदेनको कागज यस्तो थियो ।
सो रकम पटक पटक फिर्ता माग्दा समेत आज, भोली गर्दै ४ वर्ष वितेको पिडित शारादाले बताइन् । पिडकले भाइलाई पैशा तिरेको छैन नभनिदिनु म पैशा फिर्ता गरिहहाल्छु भनेर टार्ने गरेको र पछिल्लो समय पैशा तिरिसकेको भन्दै पन्छिन खोजेको शारादाको भनाइ छ । निज पारसको घरमा रकम माग्न जादाँ पटक पटक परिवार नै मिलेर कुटपिट गर्ने गरेको पिडितले बताइन् । कहिले घरमा नै आउने र पिट्ने कपाल भुत्ल्याउने गर्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय रकम तिर्नुपर्छ भनेर गाउँमा नै अनैतिक सम्बन्ध राखेको भनेर जवरजस्ती आरोप लगाएको पनि पिडित शारादाले बताइन् ।
विवाद भइरहेका बेला प्रहरीचौकी कुशेचौरीको टिम पुगेको थियो । प्रहरीका अगाडी मेरो रकम तिर्नु छ भनेर पिडित शारादाले तमसुक देखाउदा पिडक पारशले प्रहरीकै हातबाट तमसुक खोसेर च्यातेर शारादाको मुखमा कोचिदिएको बताइन् । पारसले रकम नतिरेको भन्दा प्रहरीचौकीमा म व्याज तिर्न सक्दिन साहुँ मात्रै तिर्छु भनेर पारसले भनेका थिए । तर पछि वडा कार्यालयमा पुग्दा मैले रकम तिरिसकेको भन्दै रकम नतिर्ने बताए । सोही विषयमा चैत ५ गते वडा नं. ८ को शुक्रबारे बजारमा आम भेला बसेको थियो । आम भेलामा शारादालाई गाउँबाटै निकाल्ने भन्दै पारसको परिवार सहितले हुर्मत कसेको पिडितले बताइन् । सोही समयमा कार्यपालिका सदस्य गीता वि.कको पनि उपस्थीति रहेको थियो ।
कार्यपालिका सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा बसेकी गीताले पटक पटक शारादाको मुखमा थुकेको पिडितले बताइन् । अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गरेकी गीताले पिडितलाई न्याय दिनुको सट्टा मैले जे गर्नपनि सक्छु भन्दै उल्टै थर्काएको पिडितको भनाइ छ । बाक्लो मानिसको उपस्थीति रहेका ठाउँमा एकासी आएर कालो मोसो दलेको पिडितको भनाइ छ । सो समयमा प्रत्यक्षदर्शी रहेका खडानन्द बराइलीले यो के गरेको भन्दा कार्यपालिका सदस्य वि.कले “यो महिलाको अधिकार हो, हामी जे गर्न पनि सक्छौँ” भनेकी थिइन् । यो भन्दा अगाडी पनि गीताले पिडित शारादालाई फलानो मान्छेसंग मेरो अनैतिक सम्बन्ध छ भनेर स्वीकार भनेर पटक पटक धम्की दिएको शारादा बताउछिन् । सोही भिडमा रहेकी सोही वडाकी महिला स्वास्थ्य संयम् सेविका सरस्वती चौधरीले समेत पटक पटक हातपात गरेको पिडितको भनाइ छ । प्रहरीमा भने सरस्वतिको नाम किटान जाहेरी परेको छैन् । आफु असक्त रुपमा विरामी भएकाले सरस्वतिको नाम टिपाउन भुलेको समेत पिडितले बताएकी छन् ।
यसरी हाल सम्म ५ पटक सम्म आफुलाई कुटपिट गरेको पिडितको भनाइ छ । जथाभावी कुटपिट गरेपछि मोरङ हस्पीटल प्रा.लि पथरीमा भर्ना भएकी शारादा ३ घण्टा सम्म बेहोस भएकी थिइन् । होस खुलेपछि विराट नर्सिङ होममा उपचार गराएर घर आएकी छन् । आफुलाई पिडा दिएको विषयमा न्यपालिकामा जादाँ उल्टै केही बोल्न समेत नदिएको शारादाको भनाइ छ । न्यायिक समिति संयोजकसंग समेत पटक पटक आफ्ना कुरा राख्दा चुप लाग्न भन्दै हप्काएको पिडितको भनाइ छ ।
सो विषयमा प्रहरीमा उजुरी रहेको छ । प्रहरीले छानवीन तथा सर्जिविन गर्ने काम जारी राखेको छ । सर्जिविनमा समेत आफुलाई थाहै नदिएकन सहीछाप गराएको शारादाको भनाइ छ । शुक्रबारे बजार टहरा निर्माण भइरहेको छ । बजारको सर्जिविन हो भनेर आफुलाई झुक्याएर सही गराएको पिडितको भनाइ छ । यो विषयमा दलित वर्ग उत्थानका लागि लागिपरेका विभिन्न जातीय संस्थाहरु लागि परेका छन् । जातिय भेदभाव र छुवाछुत अन्तरगत मुद्धा दर्ता गर्नुपर्छ भनेर भनिरहदाँ प्रहरीले भने सामान्य जघन्य अपराधको मुद्धा मात्रै दर्ता गरेको अमर बराइलीले बताए ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार ०७१ सालमा पिडीत बराइलीले पिडत पारस लिम्बूलाई ४ लाख रुपैयाँ व्याजमा दिएको उल्लेख छ । लिम्बूले १५ महिनापछि २ लाख साँवा फिर्ता गरेपनि वाँकी रहेको २ लाख माग्दा फिर्ता नगरेपनि उनीहरुबीच विवाद बढेको थियो । वडामा पटक पटक भेला भएको र नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा समेत लेनदेनको सो मुद्धा पुगेको थियो । त्यही क्रममा गाउँमै लेनदेन मुद्धाका बारेमा छलफल बसेको थियो । सो अवस्थामा परपुरुषसँगको सम्वन्धको प्रसंग समेत निकाल्दै पारस, फिपराज सहितका परिवारका सदस्यले कालोमोसो दलेर कुटपिट गरेको तथा प्रहरीले समेत त्यसबेला बेवास्ता गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रहरीले सो घटनापछि पारस लिम्बू, फिपराज लिम्बू, उनका २ श्रीमती तथा उषा लिम्बू, गोमा खड्का, गीता वि.क (लोहार) सहितलाई पक्राउ गरी मुद्धाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।